အဆိုပါကတ်များကိုဖတ်ရှုဖို့ယုံကြည်သူများကဖြစ်နိုင်ပါသလော | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
ကျွန်မကိုလည်းယုံကြည်သူကိုခန့်မှန်းမရနိုင်သည်ကိုဖတ်ပါ, သို့မဟုတ်အဖြစ်မဟုတ်ရင်ဖြစ်နိုင်သည်။ ဘုရားကျောင်းတစ်ပိတ်ပင်ထားမှုအပေါ်ကိုထည့်လေ့မရှိ, မိမိအဘို့အသီးအသီးပြီးသားကချိုးဖောက်ဖို့ဒါမှမဟုတ်မရွေးချယ်ပါတယ်။ တဖန်သင်တို့စုန်း၏ဇာတ်လမ်းသတိရလျှင် Baba Yaga ကြောက်လန့်, မီးရှို့, ကောင်းစွာ, ယေဘုယျအားဖြင့်ဤကဲ့သို့သောအရာတစ်ခုခု။
ကြိုဆိုပါတယ်! အခြေခံအားဖြင့်, လူတွေ, ကံဇာတာ-Teller မှလှည့်မယ့်ခက်ခဲယခုအချိန်တွင်ဘဝတွေ့ကြုံနှင့် Quote လိုအပ်လျက်, pomoschiquot; ။ သူတို့ပဲ Quote စကားကိုနားထောငျဖို့, ဖွင့်ဖို့အဆင်သင့်နှင့် charlatan ဖြစ်ကြောင်းဒါကြောင့်သူတို့တစ်တွေလမ်းရှာကြသည်; အားလုံး horoshoquot လိမ့်မည်။ ကမျြးစာကိုဖွင့်ဗေဒင်တွက်ခြင်းငှါ, နှင့်မြေပုံများအကြောင်းကိုစာဖြင့်ရေးသား, နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်အတိုင်းအတာအထိသူတို့အပြစ်သားများဖြစ်ကြသည်မဟုတ်ကြောင့်သော်လည်း, တကယ်တော့ယုံကြည်ခြင်း၏လူများ, ခန့်မှန်းဖို့တားမြစ်ထားသည်။
သင်ကလေးတစ်ဦးရှိသည်ဖို့ပြင်ဆင်ထားကြသည်မဟုတ်လျှင်ပေမယ့်မိန်းမတဦးနှင့်အတူ, ကျိန်ဆိုနိုင်ဘူး, သောက်စရာ, မီးခိုးသို့မဟုတ်အိပ်ပျော်ခြင်းခန့်မှန်းလို့မရဘူး, မနာလို rant, ကဲ့ရဲ့, လူအပေါင်းတို့ကြောင်းမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဒါကြောင့်ဒီဇိုင်းပြုလုပ် drugoe.No များစွာသောလူ, က privlekaet.Popy ဆိုရခန့်မှန်းရန်မဖြစ်နိုင်ကြောင်း, သူတို့ဝမ်နှင့်တူသောသွားတစ်ခုနက္ခတ္တဗေဒစောင့်ကြည့်လေ့လာ, .Karty နှင့်ဗေဒင်တွက်ခြင်းငှါ၏အခြားပုံစံများ, အပိတ်ပင်မှု၏အနာဂတ်နှင့်မိုးလေဝသခန့်မှန်းသို့တစေ့တစောင်း, ချဉ်ကြော်ဟောကိန်းများ, သန္ဓေသား၏ ultrasound created ပွီ, ဒါပေါ်မှာ, ထို့နောက်လူပေါင်းသို့ကြည့်ရှုရန်ကြိုးပမ်းမှုမရှိ buduschee.My မူလကပင်လျှို့ဝှက်သော, သင်ကတ်များကိုဖတ်ပြီးပေမယ့်ငါ့ကို ka အဘို့အလို့မရဘူး သငျသညျကြိုတင်ခန့်မှန်း၏လက်ရှိအမျိုးအစားအလုံခြုံဆုံးဖြစ်ကြောင်းငြထို့နောက်မာဂုပညာရှိကမျြးစာကိုတားမြစ်ချက်၏တိကျသောအမျိုးအစားများကိုစာရင်းပြုစုပိတ်ပင်လျက်, ကတ်များနှင့် ပတ်သက်. ရန်ဖြစ်ရပ်ဆန်း Hrista.Chto ကြိုတင်ခန့်မှန်းဖို့နက္ခတ်ဗေဒင်နှင့်ဝိဇ်ဇာဆရာတို့ခဲ့ကြသည်, ဘယ်နေရာမှာမညီကြောင်းဘုရားကျောင်းတီထွင် upominaniya.to, ထို့နောက်ငွေကိုသာရုန်းကန်လည်းမရှိ ယုံကြည်သူလူဦး။
ကျိန်းသေမဆိုကကတ်များပေါ်တွင်သို့မဟုတ်အခြားဘာမှပေါ် Rune ပေါ်မှာသော်လည်း, ခန့်မှန်းအပြစ်ဖြေစဉ်းစားသည်မဟုတ်
ဒါဟာရှည်လျားလူအားကောင်းကင်တမန်များသို့မဟုတ်ညျဘုရားသခငျ၏ဖြစ်ရပ်ဆန်းမဟုတ်လျှင်အနာဂတျအကွောငျးလူ့အသိပညာကျော်လွန်ဖြစ်ကြောင်း govoroilos, ခဲ့ပြီးပေမယ့်ဒီအထီးကျန်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုဖြစ်ကြောင်း, ဤအမည်မသိဤလောကသို့မဆိုထိုးဖောက်မှုကိုချိုးဖောက်, သငျသညျအထဲကဆွဲထုတ်မဆိုအသိပညာစဉ်းစားသည်
ယေဘုယျအားဖြင့် သာ. ကောင်းသည်မဟုတ်
ဒါပေမယ့်ငါမ ponyatno.V ကမျြးစာကိုမပြမြေပုံများ၏ပြုပါအဘယ်ကြောင့်ကြောင်းဖွင့်ရ, မ guesswork ဘာမှမပြောပါဘူး။
ထိုအခါငါကဖြစ်နိုင်ပါသေး Boga.Kto ကနေသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုသိနိုငျထက်ပိုကောင်းမယ့်ထင်ကြသလော
အဲဒါကို access ကိုအတည်ပြုခြင်းမရှိပါ:
ကောင်းသောအမှုအရာ, ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုးသာရှိတယ်မျှော်လင့်ထားကြသည်။ အကြောင်းမူကား, အဘယ်ကြောင့်အနာဂတျအကွောငျးသိလား
ဒီအမှန်တကယ်ယုံကြည်သူဖြစ်ပါတယ်လျှင်, လုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။ သူကသိသာယုံကြည်ပါလျှင်, ထိုတစ်ဦး prude ဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့အမှန်တကယ်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်၎င်းတို့၏ညစ်ပတ်အကျင့်ကိုဖုံးလွှမ်း, ထို့နောက် ... တယောက်မျှမရှိ။ ဗေဒင်တွက်ခြင်းငှါ, မကောင်းသောအစိတ်ဝိညာဉ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်ကိုသိရန်မလိုအပ်ပါဘူးကြောင်းအရာတစ်ခုခုကိုရှာတွေ့ထားတဲ့ကြိုးပမ်းမှုဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင်ကဒ်ကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်မှတက်မလာပါဘူး။
22 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,389 စက္ကန့်ကျော် Generate ။